Abesifazane Swimwear, Bikini Swimwear, Abafana Baswidiar - Stamgon
Izingane ezintsha ezifikayo Swimsuit ucezu olulodwa amantombazane ukubhukuda ...
☆ Umklamo omncane we-collar elincane wokuvikela ilanga osebenza kahle kanye nokuklanywa kwe-anti-clip ku-zipper ukuvikela isikhumba sezingane. ☆ Idizayini yangaphambili ye-zip kulula ukuyifaka futhi uyikhumule, futhi isetshenziswe kalula emanzini. ☆ Indwangu ithokomele futhi ithambile, futhi akulula ukulimaza isikhumba. Igama lomkhiqizo: Izingane ezintsha ezifikayo Swimsuit ucezu lwamantombazane enye yokubhukuda yezingane Izinto zokwakha: 82% Polyamide, 18% Uhlobo Lomkhiqizo weSpanex: Swimwear nge-OEM ODM Service size: S / M / L / XL Linning: 100% p ...
Ukufika okusha isiqeshana esihle sokwenza isiqephu esisodwa Izingane ...
☆ Umklamo omncane we-collar elincane wokuvikela ilanga osebenza kahle kanye nokuklanywa kwe-anti-clip ku-zipper ukuvikela isikhumba sengane. ☆ Idizayini yangaphambili ye-zip kulula ukuyifaka futhi uyikhumule, futhi isetshenziswe kalula emanzini. ☆ Indwangu ithokomele futhi ithambile, futhi akulula ukulimaza isikhumba. Igama lomkhiqizo: New Arrival cute custom one piece Swimuit Yezingane kubafana Izinto: 82% Polyamide, 18% Uhlobo Sp Product Product: Swimwear nge-OEMM ODM Service size: S / M / L / XL Linning: 100% ...
☆ Umklamo omncane we-collar elincane wokuvikela ilanga osebenza kahle kanye nokuklanywa kwe-anti-clip ku-zipper ukuvikela isikhumba sengane. ☆ Idizayini yangaphambili ye-zip kulula ukuyifaka futhi uyikhumule, futhi isetshenziswe kalula emanzini. ☆ Indwangu ithokomele futhi ithambile, futhi akulula ukulimaza isikhumba. Igama lomkhiqizo: I-New Arrival cute custom isiqephu esisodwa Izingubo zokugqoka zezingane zabafana Izinto ezibonakalayo: 82% Polyamide, 18% Uhlobo lweMikhiqizo yeSpandex: Swimwear nge-OEM ODM Service size: S / M / L / XL Linning: 100% ...
Isikhumba inyoka ethe xaxa ephrintiwe abesifazane babhukuda ...
☆ Ukubekelwa phezulu kokulawula okwezinkalweni okuphezulu, intambo yamahlombe eguqukayo .; ☆ Iphethini elihlukile elihlukile, ukuphrinta ingwe, ukuphrinta kwenyoka, ukuphrinta kwe-zebra yezilwane nokuphrinta kwezimbali; ☆ Ngaphansi Thy futhi usy, ukumboza kancane, fihla isicubu sakho futhi ubonise umzimba wakho ebukekayo; Igama lomkhiqizo: Isikhumba senyoka esikhiqizwe esikhulukazi inyoni eprintiwe abesifazane beswayidi i-sexy bikini Material: Spandex / Polyester Type Type: Bikini-Swimwear nge-OEM ODM Service size: S / M / L / XL Linning: Isici sePolyester: iSex, Imfashini, iBreathab ...
Izitayela ezintsha ze-Bohemia beachwear zokubhukuda zase-african ...
☆ SEXY CROCHET BIKINI SET. Lokhu kubhukuda okuboshwe ngesandla ngezihlakala ezinhle kungenye yezindlela ongabonakala ngazo olwandle. ☆ ISAHLULEKO NGOKUGQIBELA NGOKUFUNDA. I-halter bikini, cindezela i-padding yokuthuthukisa, iphethini enhle kakhulu. Ungagcina ukwakheka kahle komzimba wakho ngale bikini ye-crochet. ☆ ENGCWELE HALTER BIKINI SET. Ungakuthokozela ukulingana okuntofontofo kakhulu ngentambo ende noma ngabe umzimba wakho unjani. ☆ IMINININGWANE YOKUFUNDA. Isethi ye-crochet bikini ilungele ukubhukuda, ibhishi, ukugeza kwelanga, ukuphuma ...
☆ Ikhwalithi enhle kakhulu: Indlela engu-4 yokweluka indwangu enwetshiwe, embozwe ngendwangu ethambile yesikhumba, ikhululekile, futhi ingaphefumula, iqinisekisa ukuthi uzokujabulela ngokuphelele ukuyigqoka. Qaphela: usayizi ojwayelekile: S, M, L, XL, XXL. ☆ ephambili zipper ephaketheni, elula futhi ephephile ukuyisebenzisa. ☆ Lokhu kufushane kwasolwandle kukufisela umuzwa okhethekile ngenduduzo nenjabulo eholidini, i-honeymoon, uhambo olwandle lwesihlabathi, iphathi lephathi kanye nemisebenzi ehlukahlukene yamanzi. Igama lomkhiqizo: Izikebhe zebhodi lezikebhe zamabhishi asheshayo ezomisiwe, izikhawu ze-4 ze-camo board, ama-mens bea ...
☆ Okuhlanganisiwe okhalweni ngentambo nokunwebeka okucekeceke kanye namacici ensimbi. ☆ Ikhwalithi enhle kakhulu: Indwangu yokwenziwa eyi-100% ye-polyester peach yesikhumba velvet, ikhululekile, futhi ingaphefumula, iqinisekisa ukuthi uzokujabulela ngokuphelele ukuyigqoka. Qaphela: usayizi ojwayelekile: S, M, L, XL, XXL. ☆ Amaphakethe amabili angaphambili nephakethe elikhulu eliseceleni, elungele ukubeka izinto eziningi ngaphakathi. ☆ Lokhu kufushane kwasolwandle kukufisela umuzwa okhethekile ngenduduzo nenjabulo eholidini, i-honeymoon, uhambo olwandle lwesihlabathi, iphathi lephathi kanye nemisebenzi ehlukahlukene yamanzi. ...
i-bikini, isiqephu esisodwa sokubhukuda
tankini, dresswear dress & ukumboza phezulu
imens swimwear, ibhodi izikhindi
I-Yoga bra, ezembatho zezemidlalo phezulu
ihembe osebenzayo, amahembe agijimayo
Amabhulukwe e-Yoga, ama-leggings e-yoga, izikhindi ze-yoga
Masithathe intuthuko yethu ibe sezingeni eliphakeme
UQuanzhou Stamgon Trading Co Ltd. ubelokhu enza ibhizinisi lezindwangu ukusukela ngo1993. Imikhiqizo yethu ifaka phakathi izikhwanyana zasolwandle, izembatho zokugqoka kanye nokugqoka kwe-Yoga njll. Izimakethe zethu eziphambili zitholakala emazweni ase-Europe, North America, South pacific kanye naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Sinezimboni eziyisikhombisa zokusebenzisana ezinabasebenzi abangaphezu kwamakhono abangama-2300. Umphumela wethu wokukhiqiza ungafika ezigidini ezingama-US ezingama-20 ngonyaka.
Mayelana nefektri yethu yokuhlanganyela
Ifektri yethu ehlanganyelwe ekhethekile ekwenziweni kokubhukuda kanye nezingubo zezemidlalo, ezingalawula kangcono izindleko zokukhiqiza, ilawule ikhwalithi yomkhiqizo ngobukhulu obukhulu, futhi isheshise ukuphendula ekunikezelweni kwemakethe. Njengamanje, kunabasebenzi abangaphezu kwama-2300 efektri, futhi indawo yokusebenzela ingaphezu kwamamitha-skwele angama-4,000.
Sizokhulisa futhi siqinise ukusebenzisana esinakho.